Ukuzamazama komhlaba kweHaiti ka-2010: Iinkcazo zeSayensi kunye neeGoloji
Sayensi I-Plate Tectonics
Ukujonga kwi-Geology ephantsi kunye neempembelelo ezihlala njalo
NgoJanuwari 12, 2010, ilizwe elide lichithekele ubukhohlakele obukhohlakeleyo kunye nobuhlwempu obugqithiseleyo kwaqhutyelwa enye intlungu. Inyikima enkulu ye- 7.0 yabetha iHaiti, yabulala abantu abangaba ngu-250,000 kunye nokuthutha enye i-1.5 yezigidi. Ngokomlinganiselo, le nyikima yayingeyona nto imangalisayo; Enyanisweni, kwakukho iinyikima ezilikhulu ezili-17 ngo-2010 kuphela. Ukunqongophala kweHaiti kobutyebi bezoqoqosho kunye neziseko ezinokuthenjelwa, nangona kunjalo, yenze le nyikima yehlabathi efile kunazo zonke.
IHaiti yakha inxalenye yesentshona ye-Hispaniola, isiqithi kwii- Greater Antilles zoLwandle lwaseCaribbean. Esi siqithi siseGonâve microplate , esikhulu kunazo zonke ezine ezine-microplates eziphakathi kwamacwecwe aseMntla American neCaribbean. Nangona le ndawo ingenakunqwenela ukuzamazama komhlaba njengengqungquthela yoMlilo wePacific , i-geologists yazi ukuba le ndawo yayibeka ingozi (jonga eli nqaku ngo-2005).
Usosayensi ekuqaleni wabhekisela kwindawo ephosakeleyo ye-Enriquillo-Plantain Garden (EPGFZ), inkqubo ye- strike-slip faults ezenza i-Gonâve microplate - umda weparibbean weCaribbean kwaye yayidlulile kwihlabathi. Njengoko iinyanga zidlulileyo, baqonda ukuba impendulo yayingelula. Amanye amandla agxothwe yi-EPGFZ, kodwa ininzi yavela kwi-fault Léogâne yangaphambili. Ngelishwa, oku kuthetha ukuba i-EPGFZ isenomlinganiselo omkhulu wamandla elindele ukukhishwa.
Nangona ama-tsunami ahlala edibene neentlanzi, ukusekwa kwe-Haiti ye geologic kwenza ukuba kube ngumviwa ongenakwenzeka ukuba ngumswakane omkhulu. Iziphene ze-Strike-slip, ezinjengezo zidibaniswe nale ntshukumo, zihambisa amacwecwe ecaleni ngokubhekiselele kwaye aziqhelekanga ukudala ama-tsunami. Ukunyakaza okuqhelekileyo kunye nokuguqulwa okuphambeneyo , okutshintsha ngokuthe gqolo i-seafloor up and down, ngokuqhelekileyo kuyenzeka.
Ukongezelela, ubukhulu becala kwesi siganeko kunye nokuvela kwayo kumhlaba, kungekhona kunxweme, kwenza ukuba i-tsunami ingabi nakwenzeka.
Inxweme yaseHaiti, nangona kunjalo, inesakhiwo esikhulu sezonxweme - iindawo zelizwe ezomileyo kwaye zinyameko zonyaka zibangele iindwangu ezinkulu zokuhamba ukusuka ezintabeni ukuya elwandle. Ukwenza izinto zibe zibi nakakhulu, akuzange kubekho inyikima yongqungquthela ukukhupha lo mhlaba wamandla angako. Inyikima yenzeka ngonyaka ka-2010 yenza loo nto, kubangela i-landslide yangaphantsi kwamanzi eyabangela i-tsunami yendawo.
Ngaphantsi kweeveki ezintandathu emva kokubhujiswa kweHaiti, inyikima enkulu ye-8.8 yabetha isiChile. Le ntshutshiso yayinamandla angaphezu kwama-500, kodwa ukufa kwayo (500) kwakungamahlanu kuphela e-Haiti. Njani oku?
Kwaqala, i-Haiti inyikima ye-earthquake yayikuphela kweekhilomitha ezili-9 ukusuka ePort-au-Prince, inkulu-dolophu yelizwe kunye nesixeko esikhulu kunazo zonke, kwaye kugxininiswa kweekhilomitha ezili-6 ezingaphantsi komhlaba. Le mibandela yodwa ingabangela inhlekelele kwindawo apho emhlabeni jikelele.
Ukuqulunqa imiba, iHaiti ihlupheke kakhulu kwaye ayinakho iikhowudi zokwakha ezifanelekileyo kunye nezibonelelo ezizinzileyo. Abahlali basePort-au-Prince basebenzise nayiphi na impahla yokwakha kunye neendawo ezikhoyo, kwaye abaninzi bahlala kwizakhiwo eziphathekayo zekhonkrithi (kuqikelelwa ukuba iipesenti ezingama-86 zedolophu zazihlala kwiimeko zengqungquthela) ezachithwa ngokukhawuleza.
Amadolophu ase-epicenter ayenamava X.
Izibhedlele, izithuthi zokuthutha kunye neenkqubo zonxibelelwano zazingenakunceda. Izikhululo zomsakazo zaphuma emoyeni kwaye malunga nabangama-4 000 abagwetywayo basinda ejele lasePort-au-Prince. Ubukhulu obungaphezu kwama-52 ubukhulu be-4.5 okanye ngaphezulu emva kokukhubaza ilizwe elichithekile kwiintsuku ezilandelayo.
Ukungavalelwa kweemali zoncedo ezithunyelwa kwiintlanga ezijikeleze ihlabathi. Ama-dollar angama-13.4 amabhiliyoni athembiswa kwimigudu yokunceda kunye nokubuyiselwa, kunye negalelo laseMelika elenza malunga nama-30 ekhulwini. Iindlela eziwonakalisiweyo, i-airport kunye neenxweme, nangona kunjalo, zenze nzima kunzima.
Ukubuyiselwa kuye kwacotha, kodwa ilizwe liya kubuyela ngokuqhelekileyo; Ngelishwa, "isiqhelo" saseHaiti sisoloko sithetha intlanzi yezopolitiko kunye nobuhlwempu obukhulu.
I-Haiti isenaso isantya sokufa sabantwana abasemgangathweni kunye nexesha eliphantsi lokuphila kweliphi na ilizwe kwiNtshona Koloni.
Sekunjalo, kukho impawu encinci yethemba. Uqoqosho luphuculwe, luncediswe ngetyala lokuxolelwa kumaziko ehlabathini lonke. Icandelo lezokhenketho, elaliqala ukubonisa iimpawu zesithembiso phambi kwenyikima, ibuya ngokukhawuleza. I-CDC incede ekuphuculeni amaninzi kwiinkqubo zempilo zikawonke-wonke zaseHaiti. Sekunjalo, enye inyikima kuloo ndawo nayiphi na ixesha kungekudala yayiza kuba nemiphumo emibi.
Ewe, imicimbi echaphazela iHaiti yinkimbinkimbi kwaye iyakwandisa ngaphaya kweli nqaku. Khangela ezinye zezifundo eziphakanyisiweyo ukufumana ukuqonda okungcono imeko yelizwe kunye neendlela onokukunceda ngazo.
Kutheni Umthamo Wemhlaba Kubaluleke Kangako
Ukuzamazama komhlaba kweMetroliyo
Amanyathelo okuthatha isenzo sokuthintela ekuhlaselweni komhlaba
I-Tokai Earthquake ye-20xx
Isakhiwo esisisiseko seBakala leBallet
Iingcebiso zokuSebenzisana nabaFundi abaneZakhono eziPheleleyo
Izinto eziPhezulu kakhulu ziMfundisi onokuzenza
Indlela yokufumana ixesha lokuzivocavoca kwiKholeji
KwiNyuvesi yaseMzantsi Nazarene
I-Z-Boys: Imbali yabaPiyona be-Skateboarding ye-Dogtown
Indlela Yokwenza Ophuzi okanye Umlilo Wegolide
I-pilgrimage of Grace - Uvuko lwentlalo Ngethuba loLawulo lukaHenry VIII
Indlela i-Evangelion 'Live-Film Action yaze yaba ngayo
Yazi ii-Checkouts zakho: 170-150
Iimifanekiso ezi-6 ezivela kwi-'South Park 'Izidalwa Unokuba Ulahlekile
Ukuhlaziywa: I-Cleveland HiBore XLS Monster Driver